निदाउन समस्या आयो ? छिटो सुत्ने स्वस्थ तरिका जान्नुहोस् – eSidhakura
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यनिदाउन समस्या आयो ? छिटो सुत्ने स्वस्थ तरिका जान्नुहोस्
यदि कसैलाई ओछ्यानमा पुगेपछि निदाउनका लागि १० देखि २० मिनेटसम्म लाग्छ भने यसमा आत्तिनुपर्ने केही छैन । यो सामान्य हो । तर त्योभन्दा बढी समय अथवा पूरै रात निद्रा लागेन भने के गर्ने त ?
उठ्नुहोस्– यदि ओछ्यानमा पल्टेको २० मिनेटसम्म पनि निद्रा लागेन भने ओछ्यानबाट तुरुन्त उठ्नुपर्छ । त्यसपछि मधुरो बत्ती बालेको अर्को कोठामा गएर शान्तसँग बस्नुपर्छ । आफूलाई फेरि निद्रा नलागेसम्म आनन्द र शान्त महसुस हुने काम गर्न सकिन्छ । यही कार्य यदि रातमा केही समय निदाएर ब्युँझिएपछि फेरि पनि गर्न सकिन्छ ।
नि’द्रासम्बन्धी विशेषज्ञ रोबिन्स भन्छिन्, ‘यदि ओछ्यानमा नि’द्राका लागि बसेको २० मिनेटसम्म पनि निदाउन सकिँदैन भने तुरुन्तै ओछ्यान छाड्नुपर्छ । केही व्यक्तिहरूले निद्रा नलागे पनि ओछ्यानमा पल्टिँदा आराम महसुस हुने कुरामा विश्वास गर्छन् बिन्सका अनुसार यो एउटा भ्रम मात्र हो । यदि निद्रा नलाग्दा पनि ओछ्यानमा बस्ने हो भने मानिसहरूले ओछ्यानलाई पनि अनिद्रासँग जोडेर हेर्न थाल्छन् ।
ओछ्यानलाई सफा र पवित्र राख्नुहोस्– निद्रासम्बन्धी अर्का विशेषज्ञ दास गुप्ता भन्छन्, ‘ओछ्यानलाई सधैँ यौ’न सम्पर्क गर्ने र नि’दाउने स्थानमात्र बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा दिमाग सुत्ने कोठामा पुगेपछि नि’दाउनुपर्छ भन्नेमा सक्रिय रहन्छ । ओछ्यान सफा र पवित्र राखेमा सिरानीले टाउकोलाई स्पर्श गर्ने बित्तिकै निद्रा लाग्न थाल्छ ।
यही प्रक्रियालाई मात्रै पछ्याउँदा शयन कक्षमा प्रवेश गर्नासाथ के आवश्यक पर्छ मस्तिष्कले आफैँ थाहा पाउँछ । यसको मतलब के हो भने सुत्ने कोठामा प्रवेश गरेपछि टेलिभिजन हेर्ने, मोबाइल चलाउने गर्नुहुँदैन । यस्ता इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसमा प्रयोग हुने निलो प्रकाशले निद्रा लाग्न दिँदैन ।
सुत्ने कोठालाई गुँडजस्तै बनाउनुहोस्– आफ्नो मस्तिष्कलाई निन्द्राको प्रकृयाबाट पोषण प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्ने बनाउनुपर्छ । सुत्ने कोठालाई सधैँ अँध्यारो र न्यानो बनाउनुपर्छ । विज्ञानका अनुसार १५ देखि २० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राम्रो निन्द्रा लाग्छ । त्यसैले कोठालाई त्यही तापक्रममा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
तालिका तयार पार्नुहोस्– प्रत्येक दिन नियमित रूपमा दाँत माझ्नुपर्छ । मनतातो पानीले नुहाउनुपर्छ । धेरै चिसो पानीले नुहाउनु हुँदैन । मधुरो बत्तीमा बसेर किताब पढ्नुपर्छ । त्यस्तै मनलाई शान्त पार्ने संगीत सुन्नुपर्छ ।नियमित योग र ध्यानको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।
यी सबै कामहरू गर्ने निश्चित समय तालिका बनाउनुपर्छ । त्यस्तै राति ओछ्यानमा जाने र बिहान उठ्ने समय एउटै हुनुपर्छ ।यस्तो तालिका बनाउनाले म’स्तिष्क त्यही समयमा मात्र निदाउन र ब्युँझन मानिसलाई आदेश दिने गरी तालिमप्राप्त हुन्छ । त्यही काम पछि बानीको रूपमा विकास हुन्छ ।
दिमागलाई शान्त राख्नुहोस्– धेरै मानिसका लागि निद्रा नलाग्नु सबैभन्दा ठूलो रो’गजस्तो भइसकेको छ । आजको विश्वमा मानिसहरू त’नाव र ए’न्जाइटीमा रुमल्लिएका छन् । यसबीच हामीले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने छुट्याउन निकै गाह्रो छ ।
रोबिन्स भन्छिन्, ‘यस्तो भयावह परिस्थितिमा ध्यान गर्नाले निद्रा लाग्न धेरै मद्दत गर्छ । हामीमा रहेका कुविचारहरू हामी अचेत भएको अवस्थामा हामीबाट हराएर जानु नै ध्यान हो । ध्यान गरिसकेपछि यसले मानिसलाई उचित समयमा आरामदायी तरिकाले निदाउन सक्ने बनाउँछ ।
तनावका कारणहरूको सूची ओछ्यानको छेउमा राख्ने– दिमागलाई शान्त राख्ने यो अर्को उत्तम विकल्प हुन सक्छ । सधैँ आफू सुत्ने ठाउँको छेउको टेबलमा आफू त’नावमा रहनुको कारणहरूको सूची तयार गरेर राख्न सकिन्छ । सुत्नु अघि दिमागमा आएको कुरा लेख्ने गर्नुपर्छ ।
रोबिन्स भन्छिन्, ‘चाहे त्यो तनावपूर्ण, अतिसामान्य अथवा अ’तिभयानक कुरा किन नहोस्‚ त्यसलाई सुत्नुअघि नोट गर्नुपर्छ । त्यसपछि ‘यसका लागि रातमा मलाई कुनै समय छैन । यी सबै तनाव म भोलि बिहानबाट व्यवस्थापन गर्छु’ भन्दै आफैँसँग प्रण गरेर सुत्नुपर्छ ।’
गहिरो श्वास फेर्ने– रोबिन्स भन्छिन्, ‘हामीले गहिरो श्वास लियौँ भने त्यसले हामीलाई म शान्त छु‚ म गर्न सक्छु भन्नेजस्ता मन्त्रको रूपमा काम गर्छ । यसले मन म’स्तिष्कलाई आराम दिनुका साथै निद्रा लाग्न मद्दत गर्छ ।’
गहिरो श्वास लिने धेरै तरिकाहरू छन् । विज्ञहरू ‘सि’क्स इन–सि’क्स आउट’ विधि प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छन् । यसो गर्दा पेटमा बिस्तारै हावा भरिएको छ कि छैन विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यो प्रकृयामा पेटमा हावा भ’रिनु स्वभाविक हो ।
सपना देख्न नछाड्नुहोस्– यदि माथि उल्लेख गरिएका विधिहरू पछ्याएमा केही समयपछि सिरानी देख्ने बित्तिकै निदाउने गरी म’स्तिष्कले संकेत गर्छ । त्यसैले आफू निदाउन चाहन्छु भन्ने सपना देख्न कहिल्यै छाड्नुहुँदैन । बिस्तारै ती सपना वास्तविकतामा परिवर्तन हुनेछन् ।सिएनएन